Oxford Dictionaries isiZulu forum
Uyavuma, ngokusebenzisa kwakho le sevisi, ukuthi ngeke usebenzise lomphakathi ukuze upose izinto ozaziyo ukuthi zingamanga futhi/noma ziyanyundela,
azinembile, ziyaxhaphaza, zinenhlamba, zinenzondo, ziyahlukumeza, ziyichilo, zingcolile, ziphathelene nocansi, ziyasongela, zingenelela ezindabeni zomuntu siqu, noma eziphula noma yimuphi umthetho. Uyavuma ukungaposi noma yiziphi izinto ezinelungelo loshicilelo ngaphandle kwalapho ungumnikazi welungelo loshicilelo.
Thina kulo mphakathi sigodla ilungelo lokudalula ubuwena (nanoma yiluphi ulwazi esilwaziyo ngawe) esimweni lapho kuba nesikhalazo noma isinyathelo esingokomthetho esivela ngenxa yomlayezo oposwe nguwe. Sigcina wonke amakheli ephrothokholi ye-inthanethi angena kule webhusayithi.
Sicela uqaphele ukuthi izikhangiso, izincwadi ezithunyelwa iningi, izinhlelo zokuceba ngokushesha, kanye nokuheha akufaneleki kulo mphakathi.
Sigodla ilungelo lokukhipha noma yikuphi okuqukethwe nganoma yisiphi isizathu nanoma singekho nhlobo isizathu. Sigodla ilungelo lokunqamula noma yibuphi ubulungu nganoma yisiphi isizathu nanoma singekho nhlobo isizathu.
Kumelwe ube okungenani neminyaka yobudala engu-13 ukuze usebenzise le sevisi.